Xoghayaha guud ee UNWTO oo doortay Zurab Pololikashvili ayaa fariin u haya Azerbaijan
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Ururada » Xoghayaha guud ee UNWTO oo doortay Zurab Pololikashvili ayaa fariin u haya Azerbaijan
Wararka Ururada • Azerbaijan Breaking News • Jebinta Wararka Safarka • Wareysiyo • Investments • News • Dadka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka
Azerbaijan waxay ahayd taageere weyn oo heshay in Zurab Pololikashvil loo doorto Xoghayaha Guud ee UNWTO ee soo socda. Sidaa darteed layaab malahan inuu wareysigiisa ugu horeeya siiyo mid kamid ah warbaahinta Azerbaijan.
Wuxuu u sheegay Trend News in Baku: "Hidaha taariikhiga ah, dhaqanka iyo dabiiciga ah ee Azerbaijan waa in lala wadaago adduunka intiisa kale."
Wareysiga maanta la daabacay Zuraab wuxuu sii waday inuu dhaho:
“Azerbaijan waxaa ka buuxa khasnado, oo isugu jira kuwo la taaban karo iyo kuwo aan la taaban karin. Waxaan aaminsanahay inay jirto awood xoogan oo ku saabsan horumarinta dalxiiska iyadoo la suuqgeynayo xaqiiqada, caadooyinka iyo dhaqamada kala duwan ee dalka oo ay weheliso muuqaalkeeda gaarka ah. Dhaxalka taariikhiga ah, dhaqanka iyo dabiiciga ah ee Azerbaijan waa in lala wadaago adduunka intiisa kale, ”ayuu yiri.
Pololikashvili wuxuu xusay in horumarka dalxiisku uu ku saabsan yahay hal-abuurnimo isdaba joog ah laakiin sidoo kale ku saabsan aqoonsiga iyo suuq-geynta gaar ahaanta u socoshada.
Wuxuu aaminsan yahay in kor u qaadista qiyamka ay Azerbaijan leedahay, gaar ahaan suuqyada soo koraya ee aan aqoonta u lahayn Caucasus iyo gobolka Caspian, ay keeni karto fursado badan.
Isagoo taabanaya kor u qaadista booska meelaha loo dalxiis tago ee dalalka, wuxuu sheegay inay jiraan habab kala duwan iyo firfircooni ayna tahay in goob kasta oo la geeyo la aqoonsado kuwa ugu habboon.
Waxa kale oo uu carabka ku adkeeyay in dalxiiska tareenka uu helayo xiisaha sii kordhaya ee meel walba maxaa yeelay tareenku waa waddo waarta oo buuxda oo ah isku xirka jidadka transnational, dhacdo ku soo kordhay waaxda dalxiiska.
Zurab wuxuu rumeysan yahay, goobta gaarka ah ee geostrategic ee Azerbaijan ay ku dari doonto qiime horumar dheeraad ah ee dalxiiska tareenka ee Azerbaijan, Georgia iyo Turkey iyada oo loo marayo Baku-Tbilisi-Kars tareenka la furay Oktoobar 30, 2017.
Mar wax laga weydiiyay rajada dalxiiska badda ee Badda Caspian, wuxuu sheegay in Caspian-ka ay isku xirayaan shan dal, dhaqamo badan, iyo dhaqammo, sidaa darteedna ay leedahay awood aad u weyn oo xagga horumarinta dalxiiska iyo ikhtiraaca wax soo saarka ah, taas oo aan suurtagal ahayn haddii aan iskaashi gobol laga yeelan.